Maraykanka: Sarkaal ku xad gudbay nin madow ah oo shaqada laga ceyriyey (Sawirro) | Somalia News
Maraykanka: Sarkaal ku xad gudbay nin madow ah oo shaqada laga ceyriyey (Sawirro)
Saraakiisha Booliska gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in shaqada laga ceyriyay sarkaal boolis ah kaddib markii uu ku xad gudbay nin madow ah
Askariga shaqada laga saaray ayaa ku soo baxay muuqaal muujinaya isagoo dhulka ku tuuraya nin madow ah isla markaana dharbaaxo iyo feer la dhacaya.
Muuqaalka la baahiyay wuxuu muujinayaa labo boolis ah oo gacanta ku haya Roderick Walker halka midkoodna uu dharbaaxaya ama uu feerayo.
Bayaan kasoo baxay xafiiska booliska degmada Clayton ayaa lagu yiri “Sarkaalkii sida weyn u garaacay Roderick Walker wuxuu waayaya shaqadiisa kaddib markii uu awood xad dhaaf ah adeegsaday.
Arrintani ayaa Jimcihii ka dhacday meel u dhaw garoonka diyaaradaha Hartsfield-Jackson Atlanta xilli Mareykanka ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay tacaddiyada ay geystaan booliska iyo falalka cunsurinimada ah ee lagula kaco dadka madowga ah.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo maanta hortagaya Aqalka Sare
Next articleFaahfaahin: Dagaal hub culus la isku adeegsaday oo mar kale ka dhacay duleedka Muqdisho